工厂盛势启航临安营销年会圆满举行 时间: 2015年1月9日
socodka rakaabka Vertical
socodka rakaabka Horizontal
Xizi wiishka aragba Turkey Eurasian wiishka bandhig
March 23, 2017 - 26-kii, bandhig wiishka Eurasian Turkish 15aad oo lagu qabtay Istanbul, Turkey, exhibiti ku ...
March 23, 2017 - 26-kii, bandhig wiishka Eurasian Turkish 15aad oo lagu qabtay Istanbul, Turkey, bandhiga isu keentaa silsilad warshadaha wiishka caalamka oo dhan shirkadaha si fiican u yaqaan. Sida keentay saarayaasha sheyga escalator warshadaha ee gudaha wiishka ee, qeybiyeyaasha iyo bixiyeyaasha adeegga, Xizi wiishka casuumay bandhige.
Bandhiga, wiishka West si waab ka waasac furan labada dhinac ay si buuxda u muujiyaan wiishka West faa'iidooyinka ganacsiga, xoog farsamo iyo heerka marketing, la xiriir ah oo waxyaabaha cusub caaqil inay soo jiitaan dal cusub oo dunida ku baahsan inay u yimaadaan cusub iyo macaamiisha jir inaad la tashato Wadahadalada, waxay muujinney rajada aan ka la wiishashka West qoto-dheer iskaashiga iyo horumarinta ee caadiga ah. Bandhiga, wiishka West sii in industry wiishka dunida si ay u muujiyaan a xoog brand xoog iyo xoog farsamo fiican. Mustaqbalka, West ah ku dadaali doontaa in ay sahamiyaan wiishka, iyo si firfircoon ku dhaqmaan ah "baxaya" qorshaynta istaraatiijiga, iyagoo muujinayay in talaabsan brand dunida.
Sida adeega Turkish dowladda qoondeeyey wiishka, wiishka galbeed ee dalka, laakiin sidoo kale ka tagay shuqullo badan oo xoog leh, mid ka mid ah mashruuca classic Alacity, muhiim magaalada Alasehir dalka Turkiga, ayaa ku dhow inay lzmir, taas oo shan dabaq ah oo dukaamo iyo 22 dabaq ah oo guri waa Alasehir durkiya caqli casriga ah. Xizi bixiyo ee wiishashka rakaabka, wiishashka dab, escalators oo la socdo in gaarsiisan yahay heerka EN81 iyo CE shahaado ugu dambeeyay. Waayo, xizi, tani ma aha oo kaliya baahida loo qabo horumarinta, laakiin sidoo kale hawsha u qaadida "sameeyey Shiinaha" dunida.
Win in co-abuuro - 2017 xizi wiishka xisbiga marketing qaybsiga
On 24 February, galbeed wiishka "abuuro fikrad. Win at 2017 marketing wiishka galbeed xisbiga share "at w ee ...
On 24 February, galbeed wiishka "abuuro fikrad. Win at 2017 wiishka galbeed xisbiga marketing share "at hotel galbeed dhamaaday, Madaxweynaha Mr West ururka Chen Xiaxin, Ms hadiyado Theo Madaxweynaha cusub, Mr West wiishka Madaxweynaha wen-Chao Liu, galbeed wiishka suuq Ms fulinta ubaxa oo Diqsiga maamulka shirkadda iyo aad u fiican oo dhan ka ganacsada dalka iyo aqoonyahanada iibka soo ururay, wada goobjoog dhacdadan.
Xisbiga ee "Hangzhou idinku soo dhawaynaynaa inaad" song bilowday, ka dibna soo galay link muhiimka ah ee xisbiga - West wiishka baxshay xafladda. Xisbiga lagu sharfay in ay soo booqdaan Guddiga Joogtada Guddiga degmada Lin'an ah, Ms. Sheen Hui iyo West-hawlgalayaasha kor u marag xilligan taariikhiga ah, biyo ka dhan labada geesood oo dunida dacaladeeda waraabiyo ee "West" this xanbaarsan yahay ruuxa qaranka Shiinaha soo saarta brand saanacyadii warshadaha. Wiishka West saddex sano oo horumarineed, raasamaal, sida dhibic oo dhagax ah si ay xirtaan, Wabiyaal iyo saxanka badda, waa in yar oo ka mid ah raasamaal maanta cajiib ah tuuray. Maanta Xizi wiishka, baxay unug, ubaxyada cajiib ah, ammaan kula jiri doonaa bilowday safar cusub!
Ku xiga Madaxweynaha Liu Wenchao oo ah agaasimaha fulinta suuq Xie Liping guud ahaan gabay - "qaataan West ah": ubax ee West ah, kareyso lix iyo soddon sannadood, waxaan wada hor socday, mar kasta oo aan had iyo jeer qoraan Under maansadu, si dabaysha inay gabyaan fikirrada la garaneyn ... ... sanqadha Cajami gabay iyo diiwaanka shaqada ee shirkadda adag iyo dhididka oo ka mid ah sawiro jir ah, xasuus ah qof walba dib ugu soo dhaafay. The The The The The
Liu iyo Xie guud ee gabayada ku degdein sidoo kale ha co Madaxweyne oo ka mid ah West, dareenka Mr. Chen Xiaoxin, waxa uu sheegay in maanta West ah, guulaha ay wiishka ma aha shil, laakiin ka dhan labada geesood oo dunida dacaladeeda, lammaane kasta oo aad u fiican iyo wiishashka West wada shaqeeyaan, dhinac dhibtooneysa inay yimaadaan. Waxaan leenahay rooti, iyo rabto West wiishka bandhiga grand, ballanqaaday! Fiidkii oo dhan waxaa ka buuxa khamri mellow ah, qof kasta oo qaba xiiso cabniinka.
Foomka ee xisbiga waa hodan iyo midabo, barnaamij cajiib ah aan dhamaadka lahayn. xisbiga ayaa sidoo kale diyaarisay xisbiga yaab dhalashada ee la-hawlgalayaasha dhalashadiisa toddoba, Mr. Liu Wenchao, Madaxweynaha iyo Ms. Xie Liping, Madaxweynaha Suuq, si shakhsi ah u diray hambalyo ku qaataan daqiiqado ka taataabtay la socdeyba ah.
Habeen ka yaab ku dhaqaaqaan iyo farxad ka dhammaadeen, West wiishka la iid muuqaal furay Teegeero in ay soo laabashada xubinimadii. Haddii ay jirto degaanka lahayn, meeye ambaday - hawlgalayaasha gacaliyo, soo dhaweyn si ay u tagaan guriga!
In la abuuro of West sub-wiishka share marketing ka raaci doona yaabka, sidaas soco!
wax soo saarka XIZI
Copyright © 2017 XIZI wiishka